Tamin'ny herinandro lasa aho dia nijanona tao amin'ny burrito McSkillet handeha hiasa. Azoko atao angamba ny manoratra lahatsoratra iray amin'ny haben'ny fitiavako ireo sy ny sakafo maraina fisakafoanana Qdoba, fa kosa hiantra anao aho. Nandritra ny McDonalds, ny fahalalako ny fahalianana dia nahazo ny tsara indrindra tamiko ary nandidy an'i McCafe Mocha aho fa tsy hijanona eo fivarotana kafe ankafizinao.
Famantarana miloko sy be pitsiny ary fonosana miaraka amin'ny tonon-tany no manodidina anao ary mahatonga anao hahatsapa ho toy ny miakatra amin'ny kafe eropeana ianao. Tsy ianao, na izany aza. Nijery tsara aho rehefa nanindry ny bokotra havanana ilay olona ao ambadiky ny kaontera, nanetsiketsika ny ao anatiny ary nopetehiny tamin'ny crème whipped sy sôkôla.
Tonga tany amin'ny fiara aho, nandray ny otro voalohany, ary… blech. Tsy azoko antoka ny zava-nitranga, mino aho fa nisy tsy fetezana tamin'ny masinina na zavatra hafa, saingy nitifitra toy ny tifitra expresso ratsy voasaron'ny crème whipped. Saika azoko atao ny mamoaka kafe rehetra (tao amin'ny Navy aho noho ny hatsaram-panahy), saingy tsy maintsy nariako izy. Mazava ho azy, ny ekipan'izy ireo dia tsy hahafantatra raha misy olana ihany koa - na kely aza noho ny fahafantarany ny hen'omby tsara. 😉
Manana isika Starbucks ambany rihana avy amin'ny asako, ka sarotra ho an'ny homamiadana kafe ny mandalo. Tiako indrindra ny siram-dipoaram-bahinin'izy ireo… tahaka ny nahitan'ny razambenay fa nanana cocaine i Coca-Cola, matahotra aho sao ho hitantsika fa misy zavatra tsy ara-dalàna ao aminy i Starbucks Peppermint.
Ny kafe dia nohafarana avy any amin'ny roaster kafe avy any Hamilton, Ontario. Ny sipoka rehetra, na dia decaffeine aza dia mbola milamina sy manankarena ary mamy be. Sarotra ny manazava ny fahasamihafana misy amin'ny voa voaendy, nototofana ary nohomboana, afaka mamokatra rano mamy sy mamy mamy. Ireo barista ao Fivarotana kafe tsara indrindra any Indianapolis mandrefy tsara sy fotoana isaky ny mitifitra mba hahazoana antoka fa mihabe ny tsirony. Matetika aho no mahita azy ireo manary sy mamerina mametaka tsaramaso mandra-pahatonga azy ireo voatifitra tsara - indraindray ny hamandoana dia mety hanimba.
Tsy dia lafo toa an'i Starbucks izy ireo ary tena tsara lavitra (tsara lavitra noho ny amin'i McCafé), nefa tsotra sy fotsy ilay kaopy. Tsy misy zavatra manokana… afa-tsy izay ao anatiny. Izay no tonga novidiko, sa tsy izany? I do mandoa ny traikefa izay atolotry ny fivarotana koa! Efitra maro, tsy misy tariby maimaimpoana ary seza ahazoana aina.